Maamulka degmada Caluula oo kulan ay la yeesheen saraakiisha ciidamada Puntland kala hadlay wax ka qabashada burcad badeed marka ku haysata halkaasi | raascasayrmedia.com
← Baydhabo:Nin ku eedaysan inuu Basaas ahaa oo Xukun dil ah lagu fuliyey.
Qarax xalay ka dhacay magaalada Boosaaso. →
July 10, 2010 · 5:19 pm
Maamulka degmada Caluula oo kulan ay la yeesheen saraakiisha ciidamada Puntland kala hadlay wax ka qabashada burcad badeed marka ku haysata halkaasi
Maamulka degmada Caluula ayaa waxa ay maanta kulan la yeesheen saraakiisha ciidamada ammaanka Puntland kaasi oo ay uga hadlayeen arrimo la xiriira la dagaallanka burcad badeedda iyo sidii wax looga qaban lahaa kooxo burcad badeed Soomaali oo dhowaan markab ay soo qafaasheen la yimid meel u dhow xeebaha degmada Caluula.
Kulanka ay yeesheen maamulka degmada Caluula iyo saraakiisha ciidamada Puntland waxay diiradda ku saareen sidii degmadaasi loogu soo diri lahaa ciidamo ka qeyb qaata la dagaallanka burcad badeedda xeebaha ku dhow-dhow degmada Caluula si ay looga hortago in kooxaha burcad badeedda ay xeebaha degmadaasi keenaan maraakiibta ay ka soo qafaashaan xeebaha dalka Soomaaliya.
Intii uu socday kulankaasi waxaa lagu lafaguray sidii kooxo burcad badeed ah xeebaha degmada Caluula ku haysta markab ay ka soo qafaasheen xeebaha dalka Soomaaliya looga dhaadhicin lahaa inay sii daayaan, waxayna dhinacyada kulanka yeeshay ay isku afgarteen in odayaasha iyo waxgaradka ay ka soo jeedaan dhalinyarada haysata markabka lagala hadlo inay wiilashooda ka dhaadhiciyaan sii deynta markabkaasi.
Gabagabadii kulankaasi qodobada ka soo baxay oo saxaafadda lala socodsiiyay waxaa ka mid ahaa in maamulka degmada Caluula iyo saraakiisha ammaanka Puntland ay iska kaashadaan la dagaallanka kooxaha burcad badeedda Soomaalida, waxayna sheegeen in ciidamo ka qeyb qaata la dagaallanka burcad badeedda ay keeni doonaan degmada si ay uga hortagaan qorshayaasha kooxaha burcad badeedda.